Psychic kwuru banyere ọdịnihu nke Tarasov na Kostenko
Mgbe ịgba alụkwaghịm si Olga Buzovoy, onye ọkpụkpọ egwuregwu Dmitry Tarasov na-atụghị anya ya ghọọ otu n'ime ndị na-ekwukarị banyere ndị mmadụ n'ụlọ ahịa ụlọ. Ihe ọhụrụ ya na mmekorita nke Russia nke afọ 2014, Anastasia Kostenko, kpaliri ọbụna mmasị dị ukwuu na onye na-ede egwuregwu na Moscow na Lokomotiv.
Otú mmekọrịta nke Tarasov na Kostenko mepụtara
Na mbụ, a ghọtara mmekọrịta ha dị ka PR na ịgba alụkwaghịm, nke na-agba ọsọ ọsọ ọsọ na-agbaghara ọbụna Angelina Jolie na Brad Pitt. Mana ka oge na-aga, ọ bịara doo anya na ọ bụ n'etiti Dmitri na Anastasia ka e si nwee mmetụta n'ezie, nke obere oge pụrụ iduga n'ịmepụta ezinụlọ ọhụrụ. Dmitry emeela ka nne ya mata nhọrọ ya, ọ kwadoro nwa ya. Mana ọ bụghị ihe nzuzo nye onye ọ bụla na okwu mama ahụ bụ iwu na-akwado Tarasova, ọ bụkwa n'ihi ndụmọdụ ndụmọdụ ya dị na Buzova na-enweghị ihe ọ bụla mgbe ịgba alụkwaghịm gasịrị.
N'oge na-adịbeghị anya, Kostenko bipụtara foto ya na Instagram foto na ndabere nke obodo nke onye ọkpụkpọ egwuregwu, onye na-akpọ onwe ya. Ọ bụ ezie na Fans nke Olga tụfuru n'omume ahụ na nkọcha na mkparị, eziokwu ahụ ka dị - Kostenko na-akwadebe ịghọ nna-ukwu zuru oke n'ụlọ Tarasov, bụ ebe ọ na-enweghị ike ịgbanwu ụlọ ndị kachasị amasị ha.
Onye kacha mma maka Moscow kwuru banyere ọdịnihu nke Tarasov na Kostenko
Ụbọchị ole na ole gara aga, enyi Buzov na "Dom-2" Rustam Solntsev kpebiri ikwu banyere mmekọrịta n'ọdịnihu nke Tarasov na Kostenko na onye ama ama ama Moscow na onye na-edozi ya Galina Janko. Dị ka ya si kwuo, Anastasia bụ ezigbo di na nwunye maka Tarasova. Nke a bụ kpọmkwem nwa agbọghọ ọ na-achọ na nke ọ ga - enwe obi ụtọ n'ezie. Dị ka onye na-ahụ anya, ọ bụghị dị umeala n'obi ka ọ chọrọ iyi, ọ ga-eme nke ọma iji mezuo ihe mgbaru ọsọ ya ma nwee ike inye onye na-eme egwuregwu ihe ọ na-enweghị na mmekọrịta ndị gara aga. Onye nwe obodo ahụ ji n'aka na na nso nso n'ọdịnihu, Tarasov ga-enye onye ọ hụrụ n'anya aka aka na obi, nke ọ na-atụ anya ya.
Ọ bụ ihe na-akpali mmasị na amụma Galina adịghị adaba na amụma ndị a maka mmeri "Agha nke Ọrịa Ụmụaka" Victoria Rydos. Ndị ụkọchukwu St. Petersburg ahụghị agbamakwụkwọ ụgbọ ala nke Tarasov na Kostenko, ma ha anaghị esi ọnwụ na ha ga-ekewa. O kwenyere na Anastasia amabeghị mkpebi ndụ ya n'ọdịnihu: ọ na-agbaso ọchịchọ nke ihe ịga nke ọma na-achọsi ike ịghọ ezigbo nwunye.
Ksenia Sobchak gwara onye ọfịs ọkàiwu ahụ ka ya na onye na-elekọta ọrụ Lukoil dị afọ 55 nọrọ
Ivan Ọgaranya ji obi ọjọọ kenye Ksenia Sobchak maka ịsọ oyi Vitorgan: scandalous video
Ma ma enwere nwatakiri: Ana enyo Ana Kalashnikova na o na-emebi ime ime ime
Ònye ga-emeri na afọ 17 nke Agha nke Ọrịa Ụmụaka? Amụma na amụma maka isi ihe omimi nke Russia
Vera Brezhnev kpaliri mkparị nke ịgba alụkwaghịm site n'aka Konstantin Meladze
Mgbe Sobchak na-agagharị na Paris, agụụ na-agụ Vitorgan
Ònye ga-emeri Eurovision Song Kọntestị-2016: analysis na amụma
Ike agba n'ime ime
Ihe ịchọ mma maka Afọ Ọhụrụ 2018 site na akwụkwọ na ihe ndị e ji aka mee - nke e ji aka mee n'oge a nakwa n'ụdị nke USSR
Ọnọdụ nsogbu nke nwanyi, nke kachasị mfe ime mgbanwe
Ụtọ zuru okè: ihe na-esi ísì ụtọ sitere na Roses na lemon
Big Fuzzy: kedu ka esi egbusi okpu?
Otu esi amata igosipụta echiche gị
Ụzọ Glen Doman si malite n'oge mmalite site na 0 ruo 4 afọ
Kedu blọọgụ na esi esi kee ha?
Ụzọ bara uru maka ahụike nke ahụ
Manna porridge n'ime ngwa ndakwa nri
Ike nke na-eme ka ọ dị ike site na Kracie: nkwụsị, balm ihicha na mkpuchi
Ụyọkọ udara udara
Daphne Guinness - akara ngosi ndị Britain
Kedu akpụkpọ ụkwụ kacha mma maka ụmụ nwanyị dị ime?